WE ARE NYPIANS
Subject: WE ARE NYPIANS Sun Nov 23, 2008 8:09 pm
ဒီPost တင်ပြီးနောက် ၁၂နာရီခန့် အကြာတွင် ကျွန်တော်တို့NYP Organizer ဆီက Phone ဆက်လာပါတယ်။ သူတို့ ဒီကနေ့ Meeting လုပ်ကြကြောင်းနှင့် TPmyanmar Organizer များဖက်မှ Clubnypian မှ Forum ပေါ်မှ Post များအတွက်တောင်းပန်ရန်နှင့် အဆိုပါ post များကို ဖျက်သိမ်းပေးရန်။ ထိုသို ပြုလုပ်လျှင် ၄င်းတို့ ဖက်မှ ထိခိုက်သူ ညီလေးနှင့် ညီမလေးအား တောင်းပန်ပေးမည်ဟုဆိုလာပါသည်။
ဒီတော့ ကျွန်တော် ရှင်းရှင်းပဲပြောပါမယ်။ ကျွန်တော် Forum ပေါ်က ဘယ် Post ကိုမှ ဖျက်မပေးနိုင်ပါ။ NYPMM (သို့ ) Clubnypian (Especially Clubnypian.blogspot.com & clubnypian forum) က TPmyanmar နဲ့ ဘာမှပတ်သတ်မှုမရှိပါဘူး။ ၄င်းတို့ ခိုင်းတိုင်းလည်း မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ဘယ်သူက ခိုင်းခိုင်း ကိုယ်လုပ်ချင်မှလုပ်မှာပါ။ ကျွန်တော့ Post မှ ပြတ်ပြတ်သားသားရေးထားပြီးသားပါ။
ကိုယ်အမှားကို ကိုယ်က မတောင်းပန်တဲ့ အပြင် ပြန်တောင်တောင်းပန်းခိုင်းနေလေရဲ့။ ဒီတော့ TPmyanmar အနေနဲ့ အဖြစ်အပျက်အတွက် မှားခဲ့ပါကြောင်း ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး တောင်းပန်ပါက TP နှင့်ပတ်သတ်သော Post များကို User များဆက်မရေးရန် (သို့ ) Inivisible ဖြစ်အောင် ကျွန်တော်အနေနဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ဖျက်တာကိုတော့ ဘာကိုမှ ဘယ်နည်းနဲ့ မျှ မဖျက်ပေးနိုင်တဲ့ အကြောင်း အရင်အသိပေးအပ်ပါတယ်။
Forum ပေါ်မှ Post များသည် TPmyanmar Organization ကိုထိခိုက်သည်ဟုဆိုပါသည်။ ဟုတ်ကောင်းဟုတ်ပါလိမ့်မည်။ ဒါဆို ဘာလို TPmyanmar Organization ကြီး က အစကတည်းက လူကြီးသူကောင်းဆန်ဆန် ၀င်ရောက်ဖြေရှင်းသည့်အနေနှင့် ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး မတောင်းပန်ပါသနည်း။ ယခုလည်း လူအ/တုံးမှ လက်မခံနိုင်စရာ အပေးအယူ လုပ်ချင်ပါသေးသည်။ TPmyanmar Organiation ကြီးခင်ဗျား. ကျွန်တော်တို့ ဘက်မှ Forum ပေါ်တွင် TP ဘောလုံးအသင်းအား လူမတန်အောင် ကဲ့ရဲ့ရှုံ့ချခဲ့ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ TP ဘက်မှလည်း --Next Post
Last edited by Admin on Sun Nov 23, 2008 9:03 pm; edited 1 time in total
Subject: Re: WE ARE NYPIANS Sun Nov 23, 2008 8:11 pm
ခင်ဗျားတို့ TP ဘက်မှလည်း ကျွန်တော် Forum တွင်လည်းကောင်း၊ Shoutbox တွင်လည်းကောင်း၊ >>>ခံရတာတောင်နည်းသေးတယ်။ ဘာဖြစ်လဲ။ ညာဖြစ်လဲ။ သတ္တိရှိရင် ထက်ချမယ်။ အားလုံးပွဲပြီးသွားမှ သူခိုးပြန်မှ ထိုးကွင်းလာမထနဲ့။ ငါတို့အသင်းသားထိလို့ လက်သည်းစိတ် လက်ထိပ်နာတယ်။ ငါတို့တွေဝိုင်းခဲ့တယ်။ TP Myanmar ကွ။ မစည်းလုံးပဲနဲ့ မော်ကွန်းမရှိဘူး။ ငါတို့ဘက်ကရမ်းကားပါတယ်။ မင်းတို့ပြောချင်သလိုပြောနိုင်တယ်။ I don't care any one of u. ယောက်ျားလို့ ကို့ကိုယ်ကို ထင်မှ ပြသနာကိုလာရှင်းပါ။ မင်းတို့ ဒီထက်နာဦးမယ်။ မင်းတို့ ကခွေးထက်တောင်စိုးသေးတယ်။"<< အစရှိတဲ့ စိန်ခေါ်သယောင်၊ လှောင်ပြောင်သယောင်၊ Post များ၊ စကားလုံးများအပြင် ကြီးကျယ်ခန်းနားသော TPmyanmar.org site ကြီးပေါ်တွင်လည်း အားလုံးသိသောအဖြစ်မှန်နှင့် ဆန့် ကျင်ဘက် Info အမှားများကို အကျယ်တ၀င့်ရေးသားထားပါသေးတယ်။ ကိုယ့်လုပ်ရပ်ကို ကိုယ်သိသော်လည်း "TPဘက်မှာ NYPဘက်က မိန်းကလေးတွေကို ဆဲခဲ့တဲ့သူ ရှိမှာပါ။ ဟုတ်တယ်။ ယောက်ျားမပီသဘူး။ အေး ငါတို့ဆဲတာ မြန်မာ ဘာသာစကားနဲ့ ဘောလုံးကွင်းထဲမှာပဲ ဆဲခဲ့တာ။ " ကဲ .. ထိုကဲ့သို့ ရေးသားလျက်" TP Myanmar ကွ။ မစည်းလုံးပဲနဲ့ မော်ကွန်းမရှိဘူး " ရန်တွေ့ သူများကိုလည်း တွေ့ ရပါတယ်။ ဆဲခဲ့တယ်၊ ထိုးခဲ့တယ် ဘာဖြစ်လဲ ပါးစပ်ပိတ်ဆိုတဲ့ အရေးအသား၊ အပြောအဆိုတွေပါ။ ကျွန်တော် အစကတော့ မသိ၍ဟုထင်ခဲ့သော TPmyanmar Organization က တကယ်တော့ဒါတွေသိနေပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ က ခင်ဗျားတို့ ဟာ ခင်ဗျားတို့Symbol of unity ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။ ခင်ဗျားတို့ ရဲ့ Symbol ကို ခင်ဗျားတို့ TP အသင်းသားတွေက တခုတခုဆို အားလုံးဝိုင်းချကြ ရိုက်ြကနှပ်ကြရမဲ့ Unity လို့ သတ်မှတ်ကောင်းသတ်မှတ်နေတာကို TPmyanmar Organization ကြီးအနေနဲ့ကြည့်တတ်ရင် သိမှာပါ။ TPmyanmar အနေနဲ့ ဒီအတိုင်းပဲ ငါတို့ ဆော်ရပြီးရောသဘောထားတာကို သိသလိုလို၊ မသိသလိုလို၊ ၀င်မပါချင်သလိုလို လက်လျိူနေရင် ကျွန်တော်တို့ NYP အနေဖြင့် နောင်နှစ် Interpoly ဖလား ဘောလုံးကစားပွဲအပြင် အခြားမည်သည့်ကိစ္စကိုမျှ TPmyanmar ပါဝင်ပါက ကန့် ကွတ် (သို့ ) နိုပ်ထွက်မည်ဖြစ်သည်။--Next Post
Subject: Re: WE ARE NYPIANS Sun Nov 23, 2008 8:12 pm
အချုပ်ဆိုရလျှင် TPmyanmar Organization ကြီးအနေဖြင့် ၄င်းကိစ္စက TPmyanmar အားထိခိုက်သည်ဟုထင်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ကိုယ်ဖက်က အမှား ကိုယ်သိ၍သော်လည်းကောင်း၊ Clubnypian Forum ပေါ်မှ Post များကို မကြည့်ဝံ့၍သော်လည်းကောင်း၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ပြေလည်ရာပြေလည်ကြောင်း ဖြေရှင်းချင်လျင် ဖုန်းခ၊ Mrtခ အစရှိတဲ့ အဖိုးအခလည်းမကုန်၊ meeting လို့ လေလည်းမကုန်၊ paper လည်းမကုန်ပဲနဲ့ဖြစ်ပွားပါကိစ္စအတွက် TPmyanmar မှ အားလုံးကိုယ်စား TPနှင့်NYP အစာမကြေမှုများအတွက် အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါကြောင်းစာသားလေးကို clubnypian.clubdiscussion forum မှာ လာရေးလှည့်ပါ။ မရေးလည်း ကျွန်တော်တို့ အတွက် ကိစ္စတော့ မရှိပါဘူး။ TPmyanmar Organization ကြီးက ထိခိုက်တယ်ဆိုလို့ ပါ။ ပြီးတော့ ...ပြီးတော့ အားလုံးလည်း Tpmyanmar ဘာကြီးဆိုတာ သိသွားတာပေါ့။
Last edited by Admin on Sun Nov 23, 2008 8:16 pm; edited2times in total
Subject: Re: WE ARE NYPIANS Sun Nov 23, 2008 8:14 pm
သို့ ညီ/ညီမ Nyp organizer များ
ဒါ ကျွန်တော့တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါ။ အားလုံးကို အသိပေးအပ်ပါတယ်။ အားလုံးလည်းသည် အတိုင်းပဲလက်ခံမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ညီတို့ အနေတဲ့ ၄င်းခိုင်းတိုင်းလုပ်ချင်လည်း ဒီSite နှင့် တကွ blog ကို ကျွန်တော့ဆီမှ admin profile နှင့် master password ကို အချိန်မရွေးတောင်းယူနိုင်ပါတယ်။ ပြီးရင်တစ်ခါတည်း အပိုင်ယူလိုက်တော့။ ပြန်လည်းမပေးနဲ့ ။ Password ပါ change လိုက်။ ဒီ Forum ကိုကျွန်တော်တို့ စလုပ်တာ မှန်ပါတယ်။ဒါပေမယ် အားလုံးက အားလုံးအတွက်ပါ။ NYPmyanmar.com နဲ့ လည်းအတူတူပါပဲ။ Nypmyanmar.com ရဲ့ Phpbb ကို customize လုပ်ရတာ အခက်အခဲရှိလို့ ပါ။ Nypmyanmar.com ကို update လုပ်ချင်တဲ့သူရှိရင် ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ We are nypians
Subject: Re: WE ARE NYPIANS Sun Nov 23, 2008 8:56 pm
we cant let them off easily unless they apologize for what they did.
tat's what i think.
1st they bullied wit group and beat the gals,sweared at them.
then they lied and mislead abt wat they did
and now they want the posts to be disappeared just like tat?
after all those things they did?
ha..i dun think so.!!!
some soft-hearted ppl may huv blind spots for sweet talkers and agree to tat.
but it doesn't work on me.
and we huv to apologize?
we didnt start anything.
they beat the players and gals first.
those posts huv been posted cuz of their acts.
so they should apologize first.
Last edited by witchdoll on Sun Nov 23, 2008 10:51 pm; edited 1 time in total
Subject: Re: WE ARE NYPIANS Sun Nov 23, 2008 9:06 pm
Yea.Haha. what the joke. TP 3players unbanned for next match? NYP organizers are kind-hearted . That's not always good. Especially dealing with some sort of craps. Yeah. I mean it.
Lucky They not allow them to play .
Subject: Re: WE ARE NYPIANS Sun Nov 23, 2008 11:32 pm
To NYP organizer...
You are kind-hearted.Yea, we all know abt it.Actually, it is good..But, if you will solve the big problem, it is dangerous for you.. Be CAREFUL man!!!
Subject: Re: WE ARE NYPIANS Tue Nov 25, 2008 1:36 am
Subject: Re: WE ARE NYPIANS Tue Nov 25, 2008 2:38 am
Subject: Re: WE ARE NYPIANS Wed Nov 26, 2008 1:27 am
moe, how come u always laugh????
Subject: Re: WE ARE NYPIANS Wed Nov 26, 2008 2:43 am
moe>>>> dun laugh at others
Subject: Re: WE ARE NYPIANS Wed Nov 26, 2008 12:24 pm
yah..dun laugh at others..agree wif one h`h`
Subject: Re: WE ARE NYPIANS Wed Nov 26, 2008 11:50 pm
Subject: Re: WE ARE NYPIANS Fri Nov 28, 2008 1:25 am
btw,one,u'r at fourth place & i'm at fifth place at top posters list.
lol so cool... heehee
Subject: Re: WE ARE NYPIANS Wed Dec 03, 2008 1:02 am
we are shat sinf nout sint..
Subject: Re: WE ARE NYPIANS Wed Dec 03, 2008 1:03 am
hehe mar loh....
shate sint nout sint loh pyaw tar....
spell wrongly... sorry....
Subject: Re: WE ARE NYPIANS Fri Dec 26, 2008 10:32 am
Subject: Re: WE ARE NYPIANS